Sawirro: Xaflad Dowro Diini Ah Loogu Soo Xirayay Raggii La Shaqeyn Jiray Ciidanka Itoobiya Oo Lagu Qabtay Degmada Galcad.
Sunday January 08, 2017 - 18:29:52 in Wararka by
isbedel dhan walba ah ayaa kajira degmada Galcad oo dhacda gobolka Galguduud bartamaha dalka Soomaaliya.
Dabayaaqadii bishii Ramadaan sanaddii 1437 Hijriya ayaa ciidamada Xabashida Itoobiya laga xureeyay degmada Galcad oo kamid aheyd magaalooyinkii nasiibka u yeeshay in muddo 7 sanadood ah lagu maamulo ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Markii Xabashidu qabsaden Galcad waxay fasaad badeen addoomada iyo dhulka waxayna gaysteen xummaan idilkeed balse 7 bilood kadib hadda xaaladda magaaladaasi waxaa kasoo raynaysaa, dadkii cadawga ugalay ayaa markii cafis loo fidiyay ka towbadkeenay la shaqeynta cadawga kadibna waxaa lageeyay macaahiddka cilmiga lagu barto iyadoona loo furay dowraad lagu barayo diinta islaamka.
Galcad iyo dadkooda waxay kasoo kabsanayaan bilihii madoowbaa waxaana usoo galay iftiin neecaaw yididiila leh huwan, ganacsiga magaalada ayaa dib usoo laabtay iyadoona magaalada ay dib ugu laabteen boqolaal qoys oo horay isaga barakacay waqtigii gumeysiga.
Munaasabad ballaaran oo dowro sharci ah loogu soo xirayay rag taa'ibiin ah oo horay u raacay ciidanka Xabashida ayaa ka dhacday degmadaasi waxaana ka qeyb galay marti sharaf kala duwan iyo mas'uuliyiin.
Ilaa 100 rag ah ayay ahaayeen raggan dowrada loo soo xiray waxayna horay isugu soo dhiibeen maamulka islaamiga ah iyagoo kasoo laabtay ciidanka Amxaarada Itoobiya oo ay ka garab dagaalamayeen.
Xafladda oo ay kasoo qeyb galeen masuuliyiin ay kamid ahaayeen Sheekh Xasan Yacquub Cali iyo Sheekh Yuusuf Ciise waxayna dadkii dowrada loosoo gaba gabeeyay kula dardaarmeen in ay ku dadaalaan barashada cilmiga Sharciga ah islamarkaana ay ka aargoostaab cadawga Itoobiya ee dhibaatada baday.
Halkan Ka Dhageyso Munaasabada.
Halkan Hoose Ka Daawo Sawirada Munaasabada.